Kubaluleke Kangakanani iWeb Design Website kwiInjini zeeInjini? - I-Semalt Expert Concerns
Naliphi na ishishini le-intanethi, ukufumana ukuhamba ngokukhawuleza kwabaxumi kwi-intanethi yinjongo ephambili emva kokudala iwebhusayithi. Ngokusebenzisa i-Search Engine Optimisation (SEO), iqumrhu lingakwazi ukukhusela ubukho obubonakalayo obubonakalayo kwaye bubonakalayo kwi-intanethi. Umfanekiso wesimboli unokufikelela kubantu abaninzi njengoko inkampani ifinyelela abathengi abaninzi. Ngenxa yoko, ezininzi iiwebhusayithi zijolise ekuphakeni phezulu kwiinjini zokukhangela amagama athile asemqoka kwi-niche yabo. Impumelelo yale nkqubo iyenzeka ngokusebenzisa i-SEO - şişli arçelik klima servisi. Iquka iinkalo ezinjengeenkcukacha eziphambili zokukhangela, ukuxhaswa kwe-backlinking kunye nokuthengiswa kwe-viral media.
Ukususela ngoJanuwari 2017, i-SEO ishintshile ngokuthe ngcembe. Ngokomzekelo, ngaphandle kwegama elingundoqo, i-Google ngoku ijolise ekubambeni kokubambisene, ukuxhamla komnxeba wokuyila, ukubaluleka kokuqukethwe kunye neempawu zewebhu. Ukuze omnye enze i-algorithm ye-SERP ibekwe, maziqwalasele kuphela kumava omsebenzisi ngexesha leseshoni yokukhangela. Uvakalelo lwe-aesthetic kunye nombono womntu xa ziqakraza ikhonkco yakho zithintela isigqibo sabo malunga nokuba uthenge kwindawo yakho okanye ushiye kwisiphumo sophando. Ngako oko, ukwenza iwebhusayithi emva kweempawu ezifanelekileyo ze-web design kufuneka ukuba zibe nokuthengiswa kwe-intanethi.
Ukuze omnye athathe indawo efanelekileyo, uMphathi weMpumelelo yoMthengi iSemalt , IiNkonzo zeDivithali, uAlexander Peresunko, uncoma ezi zinto zilandelayo:
Ingcaphephe yobugcisa yewebhusayithi
I-website kufuneka iphumelele ekukholiseni kwayo kunye nokubamba. Isayithi elungileyo akufanele libe nemiba kunye neebhugi..Iphakheji yokubamba iqela kufuneka libe ne-bandwidth eyaneleyo yokuphendula ngokukhawuleza kunye nesantya. NgoJanuwari kulo nyaka, i-Google idinga ukuba iiwebhsayithi zikwazi ukuhamba ezinobubele kuzo ukuba zibekwe kumaphepha e-SERP.
I-SEO yinto yonke malunga nokudala ubungqina bentengiso eqinile. I-Google ibonelela ngokubaluleka kokuqukethwe ngokubaluleka. Amagama abakhethekileyo kunye nenkcazo yomxholo wakho unqinelela ukuba indawo leyo iya kugcinwa kwi-SERP. Nantoni na oyithumelayo ibonisa uhlobo oluthile oluzama ukuyenza i-viral.
Into eyenziwe yewebhusayithi yinjongo yodwa yophuhliso lwewebhu. I-Google ibonelela ngenjongo yomsebenzisi ngezo zinto. Umntu kufuneka ahendwe xa etyelela indawo yakho. Into ebonwayo yandisa ukuguqulwa ngokuguqula izivakashi zibe ngabathengi. Ulwakhiwo kufuneka linike isivakashi sakho ithuba elilula kwaye libakhokele ngokuthenga okanye ukubhalisa.
Indlela obeka ngayo umxholo kunye neenkcukacha ezizodwa ezifana ne-Call-To-Action imisebenzi inceda kakhulu kwiintengiso ozenzayo. Ukukhululeka kokuhamba ngokunceda kunceda njani abathengi ukuba bafumane ntoni. Umthengi akufanele abe nobunzima okanye amava naluphi na ubunzima xa ehamba.
Njengomrhwebi, ukuphuhliswa kwewebhu kunako ukuchaphazela ezininzi iindlela zokuthengisa zedijithali ezifana ne-SEO. I-aesthetic ibhenela isivakalisi evakalelwa kwiwebhusayithi yakho inempembelelo enkulu nokuba ngaba baya kuthenga okanye bangayi kuthenga, kunye neenjini zokukhangela, zibeka amanqaku akho ewebhu. Kwimiqathango ethile yegama eliphambili, ubuhlobo beselula kunye nokuphendula kwewebhusayithi, iimeko zeGoogle zinika ubunzima xa kuziza ukubeka iwebhusayithi. Ngenxa yoko, kubalulekile kunoma yimuphi umrhwebi onqwenela ukungena kwintsimi ye-intanethi ukuqwalasela ubuncinane bokuphuhliswa kwewebhu. Iziza ezilungileyo zinakho ukuphakanyiswa kweendawo eziphezulu kunye nokukhuphisana kwiindawo zabo ezithile.